Lôjika - Wikipedia
Ny lôjika dia sehatra iraisan-taranja izay mandalina ny fitsipika mifehy ny fahamarinan' ny fanjohian-kevitra, ny fanatsoahan-kevitra, ny fanaporofoana. Ny teny hoe lôjika dia avy amin' ny teny grika hoe λογική / logikê, izay nisampana avy amin' ny hoe de λόγος / lógos, izay midika hoe "saina", "fitenenana", "fanjohian-kevitra".
Ny lôjika tsy arak' endrika dia mikatsaka ny hamaritana ireo tohan-kevitra manan-kery tsy arak' endrika, ohatra amin' izany ny fitanisana ireo karazam-panjohian-kevitra diso. Ny lôjika arak' endrika dia maneho am-panoharana ireo fanambaràna sy lamina tohan-kevitra, mampiasa rafitra arak' endrika toy ny lôjika filaharana voalohany. Ao anatin' ny lôjika arak' endrika, ny lôjika matematika dia mandalina ny toetra ara-matematika momba ireo rafitra lôjika arak' endrika, fa ny lôjika filôzôfika kosa dia mampihatra azy ireo amin' ny olana filôzôfika toy ny toetran' ny hevi-teny, ny fahalalana, ary ny fisiana. Ny rafitra lôjika arak' endrika dia ampiharina amin' ny sehatra hafa, ka ao anatin' izany ny haiteny (izay siansa andalinana ny fiteny), ny siansan' ny fahalalana (izay siansa andalinana ny fandrenesana, ny faranitan-tsaina, ny fiteny, ny fitadidiana, ny fifantohana, ny fanjohian-kevitra, ny fiontanam-po, ny fahatsiarovan-tena, sns) ary ny siansa infôrmatika.
Ny lôjika dia nianarana hatramin' ny Andro Taloha, ka ny fomba fiasa tany am-boalohany dia nahitana ny lôjika aristôtelisiana, ny lôjika stôika, ny anviksiki (tao amin' ny filôzôfia hindoa), ary ny môhisma (ao amin' ny filôzôfia sy lôjika sinoa). Ny lôjika arak' endrika môderina dia manana ny fotony ao amin' ny asan' ireo matematisiana tamin' ny faran' ny taonjato faha-19 toa an' i Gottlob Frege.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Lôjika&oldid=1040710"
Voaova farany tamin'ny 3 Desambra 2021 amin'ny 06:55 ity pejy ity.